Permafrost | को बारे मा तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा नेटवर्क मौसम विज्ञान
पक्कै पनि तपाईंले सुन्नुभएको छ Permafrost। यो पृथ्वीको क्रस्ट हो र यो पृथ्वीको सतहको एक सतह हो, जुन स्थायी रूपमा यसको प्रकृति र यो फेला परेको ठाउँको कारणले स्थिर छ। यसको नाम यस स्थायी फ्रिजबाट आउँदछ। यद्यपि सब्सोसिलको यो लेयर स्थायी रूपमा स्थिर छ, यो बरफ वा हिउँले लगातार ढाक्दैन। यो एक धेरै चिसो र periglacial जलवायु संग क्षेत्रहरु मा पाइन्छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई सबै विशेषताहरू, गठन र permafrost पग्लनको सम्भावित परिणामहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं।
2 किन पर्माफ्रोस्ट खतरनाक छ?
3 पमामाफ्रस्ट पिघलको नतिजा
पर्माफ्रोस्टको भौगोलिक उमेर १ 15 हजार वर्ष थप छ। यद्यपि, जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी औसत तापमान बढाउँदै आएको छ, यस प्रकारको माटो पग्लने खतरामा छ। यस permafrost को लगातार पिहलनाले विभिन्न परिणाम निम्त्याउन सक्छ जुन हामी पछि यस लेखमा हेर्नेछौं। यो दशकमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो खतरामध्ये एक हो।
पर्माफ्रोस्ट दुई तहमा विभाजित छ। एकातिर, हामीसँग पेरिजलिसोल छ। यो यस माटोको सबैभन्दा गहिरा तह हो र यो पूर्ण रूपमा स्थिर छ। अर्कोतर्फ, हामीसँग मोलिसोल छ। मोलिसोल सब भन्दा सतही तह हो र अधिक सजीलो तापक्रम वा वर्तमान वातावरणीय अवस्था परिवर्तनको साथ पग्लिन सकिन्छ।
हामीले बरफको साथ पर्माफ्रस्ट भ्रमित गर्नु हुँदैन। यसको मतलब यो होइन कि यो जमिन बरफले ढाकिएको छ, तर यो जमिन हो। यो माटो चट्टान र बालुवा मा अत्यधिक गरीब वा जैविक पदार्थ मा धेरै धनी हुन सक्छ। त्यो हो, यस माटोमा जमेको पानीको ठूलो मात्रा हुन सक्छ वा यसले लगभग कुनै तरल पदार्थ समावेश गर्न सक्दछ।
यो चिसो क्षेत्रहरु मा लगभग सम्पूर्ण ग्रह को subsoil मा पाइन्छ। विशेष रूपमा हामी यसलाई साइबेरिया, नर्वे, तिब्बत, क्यानडा, अलास्का र दक्षिण अटलांटिक महासागरमा अवस्थित टापुहरूमा भेट्छौं।। यसले पृथ्वीको सतहको २० र २ 20% बीच मात्र ओगटेको छ र मरुभूमिले ओगटेको भन्दा केही कम छ। यस माटोको एक मुख्य विशेषता जीवन भनेको यसमा विकास हुन सक्छ। यस अवस्थामा हामी देख्छौं कि टुन्ड्रा पेमाफ्रोस्ट माटोमा विकसित हुन्छ।
किन पर्माफ्रोस्ट खतरनाक छ?
तपाईले त्यो हजारौं र हजारौं वर्षसम्म जान्नुपर्दछ पर्माफ्रोस्ट कार्बनिक कार्बनको ठूलो भण्डार स for्कलनका लागि जिम्मेवार छ। हामीलाई थाहा छ, जब कुनै जीवित मानिस मर्दछ, यसको शरीर कार्बनिक पदार्थमा विघटन हुँदैछ। यस माटोमा कार्बनको ठूलो मात्रा रहेको जैविक पदार्थलाई अवशोषित गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि permafrost लगभग १.1.85 अरब मेट्रिक टन कार्बनिक कार्बन जम्मा गर्न सक्षम छ।
जब हामी देख्छौं कि पर्माफ्रस्ट पिघलिन थाल्छ परिणामको रूपमा गम्भीर समस्या हुन्छ। र यसले बरफ पग्लने क्रमले सlies्केत गर्छ कि माटोले राखेका सबै जैविक कार्बनलाई वातावरणमा मिथेन र कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा छोडिन्छ। यो पग्लनेले हरितगृह ग्यासहरू वातावरणमा बढ्नका लागि बनाउँदैछ। हामीलाई याद छ कि कार्बन डाइअक्साइड र मिथेन दुई हरितगृह ग्यासहरू हुन् जुन वातावरणमा तापक्रम कायम राख्न र औसत विश्वव्यापी तापक्रममा बृद्धि गर्न सक्षम छन्।
त्यहाँ एक धेरै उपयोगी अध्ययन छ जुन वातावरणको यी दुई प्रकारका हरितगृह ग्यासहरूको सांद्रतामा परिवर्तनको एक कार्यको रूपमा तापक्रम वृद्धिलाई रेकर्ड गर्न जिम्मेवार छ। यस अध्ययन को मुख्य कारण हो पग्ले पमेमाफ्रस्ट हिउँको तुरुन्त परिणामको विश्लेषण गर्नुहोस्। तापक्रममा भएको परिवर्तनलाई जान्न, अनुसन्धानकर्ताहरूले केही नमूनाहरू निकाल्नको लागि भित्री ड्रिल गर्न आवश्यक छ यसमा कार्बनिक कार्बनको मात्रा रेकर्ड गर्न सक्षम हुन।
यी ग्याँसहरूको मात्रामा निर्भर गर्दै, जलवायु भिन्नताहरू रेकर्ड गर्न सकिन्छ। तापमानमा ठूलो वृद्धि भएपछि हजारौं बर्षदेखि फ्रिज भएका यी माटोहरू अस्थिर दरमा पग्लन थालेका छन्। यो एक स्व-भोजन श्रृंखला हो। त्यो हो, डिफ्रस्टि per पर्मिफ्रोस्टको कारणले तापमानमा बृद्धि हुन्छ, जुन, अझ अधिक permafrost पग्लन को कारण हुनेछ। त्यस बिन्दुमा पुग्नुहोस् जहाँ विश्वव्यापी औसत तापक्रम नाटकीय रूपमा बढ्नेछ।
पमामाफ्रस्ट पिघलको नतिजा
हामीलाई थाहा छ, जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी औसत तापक्रममा बृद्धि भएको छ। यी औसत तापक्रमले मौसमविज्ञानको ढाँचामा परिवर्तन गर्न र असाधारण घटनालाई निम्त्याउन सक्छ। खतरनाक घटनाहरू जस्तै लामो र अत्यधिक खडेरी, बाढीको आवृत्ति, चक्रवात, आँधीबेहरी र अन्य असाधारण घटनाहरू।
वैज्ञानिक समुदायमा यो स्थापित भयो कि विश्वव्यापी औसत तापमान २ डिग्री सेल्सियसको वृद्धि permafrost द्वारा कब्जा गरिएको सम्पूर्ण सतहको %०% को नोक्सानको कारण हुनेछ। किनकि यस फ्लोरको पग्लनाले संरचनाको नोक्सान निम्त्याउँछ, यो धेरै गम्भीर हुन्छ किनभने भुइँ माथिको र जीवनको लागि सबै कुरा समर्थन गर्दछ। यस माटोको नोक्सानले यसको माथि रहेको सबै चीज गुमाउनु हो। यसले मानव निर्मित निर्माण र वनहरू आफैंलाई र सम्पूर्ण सम्बन्धित इकोसिस्टमलाई पनि असर गर्दछ।
दक्षिणी अलास्का र दक्षिणी साइबेरियामा फेला परेको पर्माफ्रस्ट पहिले नै पग्लिरहेछ। यसले सम्पूर्ण भागलाई अझ कमजोर बनाउँछ। अमास्का र साइबेरियाको उच्च अक्षांशमा चिसो र अधिक स्थिर permafrost को भागहरु छन्। यी क्षेत्रहरू अत्यधिक मौसम परिवर्तनबाट केही राम्रो सुरक्षित देखिन्छ। आउँदो २०० बर्षमा कठोर परिवर्तनहरू अपेक्षा गरिएको थियो, तर तापक्रम बढ्दै जाँदा तिनीहरू एक अर्कालाई समय अगाडि देखिरहेका छन्।
आर्कटिक हावाबाट बढेको तापक्रमले पमाफ्रोस्टलाई द्रुत पग्लन दिँदै छ र सबै जैविक सामग्रीहरू विघटन गर्न र ग्रीन हाउस ग्यासको रूपमा वातावरणमा यसको सबै कार्बन छोड्दछ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीले permafrost र यसको पग्लनको परिणामको बारेमा बढी सिक्न सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » permafrost